Jowhar.com : Somali Leader News - News: Dagaal iyo duqeyn xoogan oo ka socda duleedka Ceelbuur
April 25 2014 08:35:44
Dagaal iyo duqeyn xoogan oo ka socda duleedka Ceelbuur
Dagaal u dhaxeeya ciidamada AMISOM ee Itoobiya ka socda iyo xoogaga Al-Shabaab ayaa si goos goos ah uga socda meel 2-km u jirta degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud.
Sida ay sheegayaan wararka madaafiic xoog leh ayaa ku socota xaafadaha Ceelbuur, oo dadkii degenaa ay horay isaga barakaceen, waxaana ciidamada huwanta ay la kulmayaan iska caabin uga imaanaya Shabaab.
Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay gudaha u geli doonaan degmada, iyadoo ciidamada isbaheysiga ay fariisimo ka sameysteen duleedka degmada.
Inkastoo ay adag tahay in la helo warar rasmi ah oo ku aadan qasaaraha dagaaladii u dambeeyay, maadaama meelaha lagu dagaalamayay ay ahaayeen goobo cidlo ah oo aanay dadka ka ag dhoweyn.
Ciidamada Itoobiya ayaa tan iyo intii ay ku soo socdeen wadada isku xirta Dhuusa Mareeb iyo Ceelbuur waxay la kulmayeen dagaalo adag oo ka dhashay qasaare kala duwan.
Degmada Ceelbuur ayaa ka mid ahaa deegaanada ay ku xooganaayeen Al-Shabaab, waxaana laga yaabaa in Shabaabka soo qaadaan weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ama inay jidka u galaan sahayda iyo saanada milateri u socota ciidamada.
0 Comments · 2976 Reads
Jowhar.com756,516 unique visits